५ र्‍याम "मिथक र गलत धारणाहरू" जुन वास्तवमा सत्य होइनन्
मंसिर १८, २०७८ ८:२९
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। यदि तपाइँ र्‍याम साइजको साइज मिलाउनुभयो भने के हुन्छ? वा र्‍याम मोड्युलहरूको पूर्ण रूपमा गलत बेमेल? यो राम्रो वा नराम्रो छ? यहाँ धेरै राम मिथकहरू छन् जुन तपाईंले जान्न आवश्यक छ! ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
RAM (Random Access Memory) कम्प्युटर वा स्मार्टफोनको आधारभूत कम्पोनेन्टहरू मध्ये एक हो। तर र्‍याम को बारेमा धेरै गलत धारणाहरू छन्, जस्तै कि तपाइँ र्‍याम आकार वा ब्रान्डहरू मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
र्‍याम को काम एक सीमित समयको लागि गणनाहरू सम्झनु हो ताकि तपाइँको प्रोसेसरले प्रत्येक पटक ती गणनाहरू पुन: गर्न आवश्यक पर्दैन। तर विभिन्न साइजको र्‍याम सँगसँगै प्रयोग गर्ने बारे गलत धारणाहरू छन्। के र्‍याम मिल्नुपर्छ? के तपाईंले उही गतिको एउटै र्‍याम प्रयोग गर्नुपर्छ?
यस लेखमा, हामी ती सबै जवाफ दिन प्रयास गर्नेछ। राम को बारे मा केहि मिथकहरु को पर्दाफाश गरौं। राम मिथकहरू
“तपाईले दुई फरक र्‍याम आकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न”: धेरै जसो ल्यापटप वा कम्प्यूटरहरू र्‍याम स्टिकहरूको लागि कम्तिमा दुईवटा स्लटहरूसँग आउँछन्, यदि धेरै होइन। धेरैजसो आधुनिक मदरबोर्डहरूले चार र्याम स्लटहरू प्रदान गर्दछ। त्यहाँ एक लोकप्रिय गलत धारणा छ कि तपाइँ विभिन्न र्‍यामआकारहरू सँगै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न वा तपाइँ एकै समयमा विभिन्न र्‍याम ब्रान्डहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो सत्य होइन। त्यसोभए, के तपाईं र्‍याम ब्रान्डहरू वा तपाईंको र्‍याम स्टिकहरूको आकारहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ? जवाफ हो हो, तपाइँ र्‍याम स्टिकहरू र र्‍याम आकारहरू र विभिन्न र्‍याम गतिहरू पनि मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ – तर र्‍याम र मोड्युलहरू मिश्रण गर्न प्रणाली प्रदर्शनको लागि उत्तम होइन।
प्रणालीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको लागि, एउटै निर्माताबाट, एउटै साइजको, र एउटै फ्रिक्वेन्सीको RAM स्टिकहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ। तर र्‍याम आकारहरू मिलाउने पछाडिको एक साधारण कारण सामान्यतया उत्तम दृष्टिकोण होइन। RAM मा धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जुन सबै मिलेर यसलाई राम्रो प्रदर्शन गर्नका लागि आउँछन्।
उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि आफ्नो र्‍याम मिलाउनुहोस् र्‍याम ले मिल्दो हार्डवेयरसँग जोड्दा राम्रो काम गर्दछ। इष्टतम कार्यसम्पादनको लागि, तपाईंको र्‍याम ले समान भोल्टेज प्रयोग गर्नुपर्छ, र तिनीहरूका सम्बन्धित नियन्त्रकहरू एकअर्का र मदरबोर्डसँग राम्रो सिङ्कमा हुनुपर्छ। त्यसैले सबै स्लटहरूमा एउटै र्‍याम मोडेल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ एकै समयमा विभिन्न आकारको र्‍याम स्टिकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको पहिलो र्‍याम को आकार 4GB छ भने, तपाइँ अझै पनि नयाँ 8GB र्‍याम थप्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले डुअल-च्यानल मोडमा स्विच गर्नुभयो (फ्लेक्स मोड पनि भनिन्छ), यसले तपाईंलाई अधिकतम प्रदर्शनमा दुई 4GB स्टिकहरू छेउछाउमा प्ले गर्न दिन्छ।
नयाँ र्‍याम को बाँकी 4GB एकल-च्यानल मोडमा चल्नेछ। समग्रमा, यो एउटै साइजको दुई र्यामहरू प्रयोग गर्ने जत्तिको छिटो छैन, तर यो पहिलेको भन्दा अझै छिटो छ।
यो समान आवृत्ति वा गति संग छ। तपाईंको र्‍याम स्टिक पूर्वनिर्धारित रूपमा तल्लो स्टिकको रूपमा समान आवृत्तिमा सञ्चालन हुनेछ। त्यसोभए, के RAM गति मिल्नुपर्छ? होइन, तर तिनीहरूले गरे राम्रो हुन्छ। तपाईलाई रामको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुराको लागि अन्तिम गाइड
“मलाई थप र्‍याम चाहिँदैन,” वा “मेरो प्रणालीमा पर्याप्त र्‍याम छ” “यति मात्रामा र्‍याम सफ्टवेयर चलाउन पर्याप्त छ। तपाईलाई अतिरिक्त र्‍याम को आवश्यकता पर्दैन,” तपाईले पाउनुहुने सामान्य सल्लाह हो। हो, यो तपाईंको एपहरू चलाउनको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, तर यसको मतलब यो छिटो हुन सक्दैन भन्ने होइन। धेरै र्‍याम ले मद्दत गर्छ, यदि तपाइँ एकै साथ RAM को विभिन्न आकारहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम कसरी बनाइन्छ भन्ने कारण हो।
धेरैजसो विकासकर्ताहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू लेख्छन् ताकि एपले उपलब्ध र्‍यामको निश्चित प्रतिशत अनुरोध गर्दछ। यदि तपाइँसँग धेरै RAM स्थापना छ भने, कार्यक्रममा उही अनुरोधको लागि थप र्‍यामआकार हुनेछ।
केवल तपाईंले आफ्नो कुल र्‍याम क्षमताको 60 प्रतिशत (वा अझ कम) मात्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई थप र्‍याम चाहिँदैन। तपाईंको नियमित कार्यहरूले RAM को 60 प्रतिशत मात्र अनुरोध गर्न सक्छ, बाँकी कार्यहरूलाई भविष्यमा सुरु गर्न अनुमति दिँदै।
कम्प्युटरहरूको लागि सामान्य थम्ब नियमको रूपमा,4GB न्यूनतम हो र 8 GB नियमित प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि सिफारिस गरिएको साइज हो। गेमरहरू, PC उत्साहीहरू र ग्राफिक्स, भिडियो वा ध्वनिसँग काम गर्ने पेशेवरहरूले 16GB खोज्नुपर्छ, जबकि 32GB प्रणालीहरू सामान्य हुँदै गइरहेका छन्। यो सबै निर्भर गर्दछ कि तपाईलाई कति र्‍याम चाहिन्छ?
“र्‍याम साइज सबै कुराले महत्त्वपूर्ण छ”: तपाईलाई थाहा छ तपाईको फोन वा पीसीमा कति र्याम छ। जब कसैले उनीहरूको पीसीमा धेरै र्याम छ भन्छन्, तपाइँ स्वचालित रूपमा मान्नुहोस् कि तिनीहरूको प्रणाली छिटो चल्नेछ। तर यो सत्य होइन। RAM क्षमता वा साइजले त्यति धेरै फरक पार्दैन।
र्‍याम प्रदर्शन को निर्धारण कारकहरु बीच गति र आवृत्ति हो। CPU जस्तै,र्‍याम को घडी गति छ। घडीको गति जति बढी हुन्छ, त्यसले एक सेकेण्डमा त्यति धेरै काम गर्न सक्छ। तपाईले प्रायः 2400MHz वा 3000MHz फ्रिक्वेन्सीहरूसँग र्‍याम स्टिकहरू फेला पार्नुहुनेछ, जबकि 3200MHz र 3600MHz अब उच्च-अन्त प्रणालीहरूको लागि मानक हो।
अंग्रेजीमा CPU: CPU भनेको के हो र यसले के गर्छ? त्यहाँ एउटा समस्या छ जुन यहाँ हुन सक्छ कि फरक र्‍याम गतिले तपाईंलाई दुई तरिकामा असर गर्छ। पहिलो, यदि तपाईंको र्‍याम 2000MHz मा चल्छ, तर तपाईंको मदरबोर्डले 1333MHz RAM मात्र समर्थन गर्दछ, तपाईंको प्रणालीले दुई गतिहरू बीचको 700MHz भिन्नता प्रयोग गर्दैन।
दोस्रो, यदि तपाईंले र्‍याम मोड्युलहरू विभिन्न गतिहरूसँग मिलाउनुभयो भने, दुवै स्टिकहरू सबैभन्दा ढिलो मोड्युलको गतिमा चल्नेछन्। त्यसोभए, यदि तपाइँसँग 2400 MHz मा चलिरहेको र्‍याम को एउटा स्टिक र 3600 MHz मा चलिरहेको छ भने, दुबै स्टिकहरू ढिलो र्‍याममा चल्नेछ, जसले गर्दा छिटो र्‍याम गतिको लागि क्षमता बर्बाद हुनेछ।
सामान्यतया, एक नियमित कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले 8GB र 16GB र्‍याम बीचको भिन्नतालाई याद गर्दैन। यद्यपि, यसलाई उही 8GB छिटो र्‍याम मा स्विच गर्नाले महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो मेसिन कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा, तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ तपाईको लागि कुन महत्त्वपूर्ण छ: छिटो र्‍याम वा धेरै र्‍याम?
“आफ्नो गति बढाउन आफ्नो र्‍याम सफा गर्नुहोस्” आफ्नो र्यामलाई छिटो बनाउन सफा गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मिथक हो। छोटकरीमा, आफ्नो र्‍याम सफा नगर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको प्रणाली प्रक्रियाहरु छिटो राख्न उपयोगी डेटा संग तपाइँको र्‍याम भर्न चाहानुहुन्छ।
र्‍याम को काम निष्क्रिय बस्नु होइन। वास्तवमा, तपाइँको अपरेटिङ सिस्टम र तपाइँको सफ्टवेयर उपलब्ध र्‍याम को हरेक थोरै बिट प्रयोग गरिनु पर्छ। आजकल, त्यहाँ धेरै र्‍याम बूस्टर प्रोग्रामहरू छन्, जसले सम्पूर्ण र्यामलाई एकै पटक खाली गर्दछ। तर यसले वास्तवमा तपाइँको प्रणालीलाई ढिलो गर्न सक्छ किनभने “फ्री अप” को अर्थ तपाइँ र्‍याम को मेमोरीबाट केहि गणना गर्दै हुनुहुन्छ।
र्‍याम तपाईको हार्ड ड्राइभ जस्तै छैन। र्‍याम ले डेटा स्वत: व्यवस्थित गर्दछ, बारम्बार पहुँच गरिएको डाटा होल्ड गर्न समायोजन। यदि तपाइँसँग 4GB कोर्‍याम छ भने, तपाइँको प्रणाली लगातार ती 4GB मा पहुँच गरिएको डाटा लेख्छ, मेट्छ, र पुन: लेख्छ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाईको र्‍याम लाई निरन्तर भर्नु राम्रो कुरा हो। यदि तपाइँ लगातार आफ्नो र्‍याम भर्नुहुन्छ भने, यसले अन्य गति समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। धेरैजसो आधुनिक अपरेटिङ सिस्टमहरूले पेजिङ फाइल प्रयोग गर्छन्, जसलाई भर्चुअल मेमोरीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। तपाईंको कम्प्युटरले सुपर-फास्ट र्‍याम बाट धेरै ढिलो नियमित मेमोरीमा केही डाटा धकेल्न सुरु गर्नेछ।
लक्षण, परीक्षण र र्‍याम समस्याहरूको निदानको लागि? यो सजिलो छ यदि तपाइँ यसलाई चलाखीपूर्वक गर्नुहुन्छ
भर्चुअल मेमोरी साँच्चै उपयोगी छ किनभने यसले तपाइँको कम्प्युटरलाई क्रल गर्नबाट रोक्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ बारम्बार र्‍याम को बाहिर चलाउनुहुन्छ भने, यो सामान्यतया संकेत हो कि यो केहि उच्च-क्षमता र्‍याम मोड्युलहरू किन्नको लागि समय हो।
त्यसैले तपाईंले र्‍याम बूस्टिङ वा मेमोरी क्लिनिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु हुँदैन। तिनीहरू काम गर्दैनन्, बरु तिनीहरू केवल एक उपद्रव र समय बर्बाद हुन्। नराम्रो मा, तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा एडवेयर वा स्क्यामवेयर परिचय गर्न सक्नुहुन्छ।
“तपाईले समान संख्याको र्‍याम स्टिकहरू प्रयोग गर्नुपर्छ” अन्तिम मिथक यो हो कि तपाईले सधैं समान संख्याको र्‍याम स्टिकहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। विभिन्न साइजको पहिलेको मिथक जस्तै, तपाईंले दुई वा चार वा छवटा र्‍याम स्टिकहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। होइन, तपाईं र्‍याम को एकल स्टिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ – त्यसैले निर्माताहरूले र्‍याम को एकल स्टिक बनाउँछन् र बेच्छन्।
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने तपाइँ र्‍याम को तीनवटा स्टिकहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर माथिको रूपमा, यो समग्र प्रदर्शनको लागतमा आउन सक्छ। यदि तपाईंसँग दुईवटा मिल्दो 8GB र्‍याम स्टिकहरू छन् भने, तिनीहरू डुअल-च्यानल मोडमा चल्नेछन्, सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रभावकारी प्रणाली प्रदर्शन प्रदान गर्दै।
अब, मानौं तपाईसँग 8GB र्‍याम को तीन स्टिक छ, तपाईको कुल मेमोरी 24GB मा बढाएर। महान, सही? तपाइँको प्रणाली कन्फिगरेसनमा निर्भर गर्दछ, तपाइँले प्रयोग गर्नुहुने र्‍याम को प्रकार, र तपाइँको मदरबोर्ड, र्‍याम को तेस्रो स्टिक प्रस्तुत गर्दा र्‍याम को पहिलो दुई स्टिकहरूको लागि दोहोरो च्यानल RAM समर्थन असक्षम हुन सक्छ। त्यसोभए, जब तपाईंसँग ठूलो क्षमता हुन्छ, तपाईंको समग्र प्रदर्शन घट्न सक्छ।
तपाईले उही संख्याको र्‍याम स्टिकहरू प्रयोग गर्ने बारे अनलाइन धेरै बहस पाउनुहुनेछ। तपाईंले सम संख्या प्रयोग गर्नुपर्दैन, तर यदि तपाईंले गर्नुभयो भने यसले तपाईंको समग्र प्रणालीको कार्यसम्पादनलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ।
एकैचोटि सबै र्‍याम मिथकहरू बस्ट गर्दै: र्‍याम को बारेमा यी पाँच मिथकहरू सबैभन्दा सामान्य छन्। तपाईं र्‍याम को साथ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ: विभिन्न र्‍याम, विभिन्न गति, विभिन्न आकार, र यस्तै। तर प्राय जसो यसले तपाईको कम्प्युटरलाई ढिलो गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईको र्‍याम स्टिकहरू मिलाउन सधैं राम्रो हुन्छ। यस तरिकाले, तपाईंले उपलब्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ, र बेमेल मेमोरी मोड्युलहरूबाट उत्पन्न हुने भ्रष्टाचार वा अन्य समस्याहरूको सम्भावना कम छ।